Ugboro abụọ kwadoro Fishing Igwe Ọdụdọ emepụta na suppliers | Horizon
Dabere na ya na ihe onwunwe na ọrụ, na abụọ kwadoro magnet na-akpọ abụọ kwadoro ike Neodymium salvage azu magnet maka akụ ịchụ nta. Ọ bụ ihe magnetik usoro mere si tumadi ike obere ụwa Neodymium magnet, ígwè ikpe na oké mkpa anya bolts. Uniquedị pụrụ iche na-eme ka magnet dị obere okpukpu abụọ dị mfe iji mepụta ike dị ukwuu iji nwee ngwa dịgasị iche dịka ịkụ azụ magnet, na-ebuli elu, na-ebuli ma na-ewepụta ihe dị iche iche nwere ígwè.
Atụmatụ maka Igwe Ọdụdọ Abụọ
1. Agbanwee igwe anaghị agba nchara eyebolt: Nke a haziri na-enyere ndị ọrụ iji ha pụrụ iche nko kama izute ha pụrụ iche ngwa.
2. Nrụgide dị elu n'etiti eyebolt na magnet: Igwe mgbanaka na-ebelata ohere nke nkuchi anya site na ịlafu magnet.
3. Ugboro abụọ na-adọta n'akụkụ: Nzube a na-eme ka mpaghara ahụ nwee ike magnetik, nke ga-eme ka magnet ahụ nwere akụkụ abụọ na-eme ka ihe ịga nke ọma ichu akụ ahụ nke ọma
Etu aga-esi mepụta Igwe Ọtọ Nke abụọ
1. R&D na ịme anwansị: Dị ka ndị ahịa 'gbagwojuru anya chọrọ, anyị kwesịrị ịbanye na R&D na ịme anwansị usoro, chọpụta zuru ezu mkpa maka ndọta tinyere ndọta ihe onwunwe, udi, size, mkpuchi na ọkwa, ígwè ikpe ihe na kenha size, usoro nke ichikota ihe ndi ozo, wdg. Ma nlele di nkpa iji mezue imewe.
2. Imepụta Igwe Ọdụdọ Neodymium: N'oge usoro ndọta magnet, ị ga-ejikwa ihe ndọta na teknụzụ imepụta ya ga-achịkwa nke ọma, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpebi ike na njide nke ndọta azụ akụkụ abụọ. Mgbe ụfọdụ, akara ndọta kwesịrị ịdị elu karịa ọkwa dị ala karịa N35, yabụ iji nweta ike dị elu na nke pere mpe.
3. họrọ ihe nchara na ịkpụzi ihe igwe: Ihe nke nchara ígwè dịkwa mkpa ịmetụta ike ahụ, n'ihi na ihe nchara ahụ kwesịrị inyere ike ndọta nke ala NdFeB magnet na-adịkarị n'etiti. Ọzọkwa, ihe nchara ahụ nwere ike ichebe ndọta na-adịgide adịgide nke NdFeB site na ibelata na ịkụcha. Ihe ikpe bụ obere carbon nchara.
4. Na-ejuputa oji ojii: Oghere dị n’etiti ndọta NdFeB na ihe nchara bụ nke jupụtara na mmanụ ojii, nke nwere ike idozi magnet Neodymium na nchara ígwè ahụ nke ọma, wee kpuchido magnet diski Neodymium ka ọ daa wee gbasaa oge ọrụ ya.
1. Ogo dị elu: NdFeB magnet, ihe kachasị mkpa mepụtara site na ụlọ ọrụ anyị, nke na-enyere anyị aka ịme magnet mma n'okpuru njikwa.
2. Cost irè: Na-ụlọ mmepụta ihe na-enyere anyị iji hụ na anyị azu magnet na otu àgwà ma na ala price tụnyere ndị asọmpi '.
3. Fast nnyefe: Ọtụtụ ọkara okokụre ngwaahịa na ngwaahịa na Na-ụlọ echepụta ike na-enyere a dị na-oge nnyefe nke azu ndọta.
4. Nhọrọ ndị ọzọ: Nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịchọta. Ọzọkwa, mmepụta anyị na nrụpụta ụlọ anyị na-enyere nhọrọ nke usoro magnetik maka ndị ahịa ọkaibe. Anyị nwere ike izute nzụta nkwụsị dị mfe.
Nka na ụzụ Data maka ugboro abụọ kwadoro Igwe Ọdụdọ
Nọmba Nkebi D H M Ike Nha ịbụ Oke Operating Okpomọkụ
mm mm mm n'arọ Iwu g Celsius C Celsius F
Nke gara aga: Neodymium Channel Igwe Ọdụdọ
Osote: Single kwadoro Azụ Igwe Ọdụdọ